China Nylon fehikibo fehikibo vita amin'ny orinasa sy mpamatsy | H & F.nylon
MC nylon belt pulley dia nampiharina tao amin'ny indostrian'ny milina nandritra ny am-polony taona maro ho an'ny tombony tsy manam-paharoa amin'ny tabataba ambany, manitatra ny androm-piainan'ny tady tariby, ny fanosorana tena sns.
Tombontsoa amin'ny fampiharana ny pulley belt nylon
(1) Manitatra ny androm-piainan'ny tady tariby, coefficient kely amin'ny friksi,. Raha tsy misy fampiasana pulley nylon fehikibo mialoha ny androm-piainan'ny tady tariby dia 1,2 volana fotsiny, dia azo ampiasaina mandritra ny 4 volana.
(2) Fanosorana tsara, fanoherana ny abrasion,. Ny fanaraha-maso ny alitara pulley nilona malama, tsy misy indentation ary hitafy famantarana.
(3) Hentitra tsara. Miorina kokoa amin'ny fiantraikany noho ny kofehy vy.
(4) Mavesatra maivana kokoa, tsy misy harafesina. Ny lanjany dia mitovy amin'ny 1/8 kofehy vy, izay mora soloina ary mampihena ny hamafin'ny asa ataon'ny mpiasa.
(5) Fitaovana elektrika tsy dia tsara. Atsaharo ny tany am-boalohany ao amin'ny farango rehefa mihodina mampiasa ny tady vy ho toy ny tany, fiarovana tsara ny tady vy amin'ny fahasimban'ny arc.
Entana: paompy fehin-kibo nylon
Sokajy: Fitaovana / kojakoja mekanika
Toerana niandohana: huai'an China
fitaovana: nylon 95% sy akora hafa.
taratasy fanamarinana: mahafeno fepetra amin'ny fenitra anatiny
1. Ny fanomezan-toky kalitao
Alohan'ny famonosana dia tokony hofehezintsika ny kalitaon'ny dingana tsirairay mba hialana amin'ny lesoka amin'ny fizotry ny famokarana.
2. Fotoana fanaterana haingana
Misy ny tahiry ampy ary ny fitaovana mandroso sy ny milina ampiasaina amin'ny famokarana hahazoana antoka ny fandefasana ao anatin'ny 15-30 andro.
R&D matihanina aorian'ny varotra mpiasa, azafady mifandraisa aminay, hamaly izahay ao anatin'ny 24 ora
Ampiasaina be izy amin'ny fananganana tsipika herinaratra ambony.
1: fonosana kitapo PP misy fahaizan'ny entana misimisy kokoa.
2: fonosana baoritra misy fonosana miboiboika ao anatiny.
3: fonosana pallet hanana fiarovana sy fiarovana bebe kokoa.
4: fonosana namboarina hafa.
Previous: nylon fitaovana ho an'ny milina
Manaraka: Kill nylon avo lenta ho an'ny crane
Telo fehikibo nylon